Taom-baovao miavaka:Miaraka amin’ny RLM Communication -
AccueilRaharaham-pirenenaTaom-baovao miavaka:Miaraka amin’ny RLM Communication
Efa ao anatin’ny vanim-potoanan’ny fety tanteraka isika ankehitriny. Ny fetin’ny krismasy aloha izao no akaiky indrindra ary miompana amin’izany avokoa ny ezaka ataon’ny isan-tokantrano: kilalao, fitafiana, sakafo. Afaka herinandro monja aorian’izany dia hifanesy ny fetin’ny faran’ny taona sy ny taom-baovao. Mikasika izay taom-baovao izay indrindra dia manomana “Tombola Taom-baovao” ho an’ny mpamaky azy ny Groupe RLM Communication, ahitàna ny gazety La Ligne de Mire sy La Dépêche ary ny Triatra.
Tsotra ny fandraisana anjara amin’izany “Tombola Taom-baovao” izany. Isaka ny mividy gazety La Ligne de Mire sy La Dépêche ary Triatra ny mpamaky dia mameno ny anarana sy ny fanampin’anarany miampy ny adiresy mazava, ny nomeraon’ny finday eo amin’ny toerana voatokana amin’izany ary manatitra izany aty amin’ny foiben’ny RLM Communication, Immeuble STOI Ankorondrano. Arakaraka ny hamaroan’ny tapakila fandraisana anjara no mampitombo ny vintana ahazoana ireo loka goavana.
Misy karazany telo ny loka amin’ity “Tombola Taom-baovao” ity. Ny voalohany dia moto cross PETER 150GY-38 Plus, ny loka faharoa dia moto scooter PETER Big Boy 49 RS ary ny loka fahatelo dia fahitalavitra SAMSUNG curved 48”. Misokatra ny lanonana!
Amin’ny faha-28 Janoary 2017 no hanatanterahana ny fisarihana. Holazaina amin’ny gazety ihany ny toerana hanaovana izany lanonana goavana fifampiarahabana tratry ny taona miaraka gazety La Ligne de Mire, La Dépêche sy Triatra ary ny AZ Radio sy Radio Mivantana ary ny Radio sy ny Television Naka ao amin’ny RLM Communication izany.